तेश्रो मदन स्मृति कप भलिबल : ८ खेल सम्पन्न, जित कस्को पोल्टामा ? – Himal FM 90.2 MHz
तेश्रो मदन स्मृति कप भलिबल : ८ खेल सम्पन्न, जित कस्को पोल्टामा ?
खेलकुद adminhimal February 18, 2020
सोलुखुम्बु – सल्लेरीमा शुरु तेश्रो मदन स्मृति कप प्रदेश १ स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सोलुखुम्बुले विजयी शुरु गरेको छ ।
मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमी १ नम्बर प्रदेश कमिटीको आयोजनामा शुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो दिन ८ खेलहरु सम्पन्न भएका छन् । लिगकम नक आउटका आधारमा खेलाइएको खेलमा मोरङ, ओखलढुंगा, झापा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, धनकुटाले विजयी शुरुवात गरेको छ ।
पहिलो खेलमा सोलुखुम्बुले भोजपुरलाई २५–१७ र २५–२० को सोझो सेटमा पराजित गर्यो । मोरङले खोटाङलाई २५– १४, १२– २५ र २५– २० मा पराजित गर्दा ओखलढुंगाले तेह्रथुमलाई २५– १८ र २५– २३ को सेटमा पराजित गर्यो । यस्तै झापाले धनकुटालाई २५–२० र २६–२४ को सोझो सेटमा पराजित गर्दा पाँचथर सुनसरीसँग २५– १९ र २५– २२ ले पराजित भयो ।
त्यस्तै, धनकुटाले इलामलाई २१– २५, २५– १९ र २५– १७ मा पराजित गर्यो । ओखलढुंगाले खोटाङलाई २५– १८ र २५– १४ मा पराजित गर्दा र मोरङ र तेह्रथुम बीचको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा तेह्रथुम १९– २५, २५– २१ र २५–१५ ले विजयी भयो ।
आगामी फागुन १० सम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले क्रमशः एक लाख ५० हजार, एक लाख र पचास हजार नगदका साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन् ।